Induction Inogadzira, inopisa kufomu, kupisa kuumba kurapa
musha / Applications / Induction Forging / Induction Kugadzira
Category: Induction Forging Tags: forging, kugadzira kupisa kupisa, kugadzira induction, induction forging, induction yekugadzira michina, kudonhedzwa kugadzira furnace, induction yekugadzira muchina, induction yekuumba system, induction inopisa kugadzira
Induction Kugadzira & Hot Kuumba Teknolojia ndiyo nzira yekuputika plastiki simbi yakaitwa nenyundo pane imwe chete yesimbi.Metal induction inging and hot forming inonyanya kukohwa kutengesa maitiro. Maitiro ekugadzira uye kupisa mafomu anosanganisira kupfugama kana kuumba simbi billet kana kupunzika mushure mokunge wapisa kupisa kunotonhora apo kusagadzikana kwekushandura kunenge kusina simba. Zvigadziro zvezvinhu zvisiri izvo zvinogona kushandiswa zvakare. Kuda kwekugadzirisa mhinduro kwakagadzirirwa munyika dzakawanda, kunyanya musimbi nemasitori. Mienzaniso yezvinhu zvaunogona kuita nekugadzira induction uye kupisa kwakagadzirwa ndeye aluminium, ndarira, mhangura, simbi yesimbi uye simbi isina tsvina.
Zvose Kugadzira / Kupisa Mafuro Maitiro
Induction Inotungisa mishonga inowanzoshandiswa kupisa mabheti emidziyo, mabhairi, zvigadziko zvemhangura, uye titaniti mabhuti kusvika pakushambidzwa kwakakodzera kwekugadzira uye kupisa kuumba.
Rinoguma Kugadzira / Kutsidzira Mafomu Okugadzira
Induction Kutsiva inoshandiswa kupisa zvikamu zvakadai semapombi, magumo, zvikamu zvemotokari, uye bhero zvinoguma nekugadzira zvishoma uye kuumba maitiro.
Iyo Induction Inotakura / Moto Kuumba Mazano
Kana ichienzaniswa nemigero inowanikwa, Induction Forging Furna inopa huwandu hwehutano uye hunhu hwakanaka:
1. Nguva shoma shoma dzinopisa nguva, kuderedza kuwedzerwa uye kusvibiswa
2. Inyore uye yakarurama kutonhora kutaridzika kwekutonga Zvikamu pazvinotonhora kunze kwezvinyorwa zvinogona kuonekwa uye kubviswa
3. Hapana nguva yakarashika yakamirira chiviso chichikwira kumhepo inenge yakakodzera
4. Automated induction heat machine inoda basa risina basa
5. Kupisa kunogona kutungamirirwa kune imwe pfungwa, iyo inonyanya kukosha kune zvikamu zvine imwe chete inogadzira nzvimbo.
6. Kukura kukuru kwekupisa - kupisa kunogadzirwa muchikamu chacho uye hakudi kupisa mukamuri hombe.
7. Maitiro akanaka ekushanda. Iyo chete inopisa iri mumhepo ndiyo yezvikamu zvayo pachavo. Mamiriro ekushanda anonyanya kufadza kupfuura ane furna.